९ फागुन, काठमाडौं । नेपालको सबैभन्दा ठूलो अनलाइन बजार दराजले फागुन ११ देखि दराज हाट बजार सुरु हुने घोषणा गरेको छ । यस अभियानका साथ दराजले ग्राहकहरुको लागि महा डील, शून्य व्याजमा सजिलो मासिक किस्त (ईएमआई), खेल १ रूपैयाँको, निः शुल्क वितरण, निःशुल्क भाउचरहरु जस्ता आकर्षक प्रस्तावहरु लिएर आएको छ ।
यसका साथै ग्राहकहरुले दराज हाट बजारमा ५ लाख भन्दा बढी उत्पादनहरू उत्तम मूल्यमा पाउनेछन् जसमा हरेक प्रकारका लुगा कपडा, नयाँ ग्याजेट, किराना, इत्यादी सामानहरू पर्दछन् । दराज हाट बजारमा प्रदर्शित ‘खेल १ रुपैयाँको’ गेममा भाग लिये ग्राहकहरुले रु. १९,९९९ मूल्यको नयाँ ‘मोटोरोला जी प्ले’ जस्ता पुरस्कार केवल १ रुपैयाँमा जित्न सक्नेछन् ।
यस बाहेक ग्राहकहरुले रु. १५,९९० मूल्यको ‘अनर वाच म्यगिक’ घडी, साथै रु. २१,७२५ पर्ने आकर्षक ‘तीन सेटको कामिलिंत जक सफ्ट साइड स्पिनर सुटकेस’ पनि जित्न सक्नेछन् । योसहित रु. ७८४५ पर्ने ‘छ महिनाको डिशहोम इन्टरनेट प्याकेज’ पनि जित्न सकिन्छ साथै अन्य उत्पादनहरु पनि रहेका छन् । खेलमा भाग लिन ग्राहकहरूले बैङ्क कार्ड मार्फत माथि तोकिएको समानहरुलाई दराज एपमा दिइएको भाउचर कोड प्रयोग गरि १ रुपैयाँमा भुक्तानी गर्न सक्दछन् । यदि जितेनन् भने रकम फिर्ता हुनेछ ।
किनमेललाई सुविधाजनक बनाउन दाराजले नेपालका ४ अग्रणी बैङ्कहरू:
एनआईसी एशिया बैङ्क, सनराइज बैङ्क, सिटिजन्स बैङ्क, र माछापुच्छ्रे बैङ्कसँग साझेदारी गरि सजिलो मासिक किस्ता सेवा (ईएमआई) शुरू गरेको छ । माथि उल्लेखित बैङ्कका ग्राहकहरूले उनीहरूको क्रेडिट कार्डको साथ आफुलाई मनपरेको उत्पादनहरू शून्य ब्याज र शून्य डाउनपेमेन्टमा खरिद गर्न सक्दछन् ।
यसबाहेक, ग्राहकहरूले दराज बैङ्क डेज छूटमार्फत डेबिट र क्रेडिट कार्ड बाट प्रीपेमेन्ट गर्दा थप १५ प्रतिशत (रु ५०० सम्म) छुट् पाउन सक्छन् । यो अफर प्रत्येक दिन एकल बैङ्कमा सीमित छ ।
बैङ्क डेज अफर यस्ता छन् ।
-आइतवारः सिद्धार्थ बैङ्कबाट १५ प्रतिशत सम्म छूट (अधिकतम रु. ५००)
-सोमबारः सानिमा बैङ्कबाट १० प्रतिशत सम्म छूट (अधिकतम रु. ५००)
-बुधवारः एनआईसी एशिया बैङ्कबाट १० प्रतिशत सम्म छूट (अधिकतम रु. ५००)
-शुक्रवारः नाबिल बैङ्कबाट १० प्रतिशत सम्म छूट (अधिकतम रु. ५००)
-शनिवारः स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कबाट १० प्रतिशत सम्म छूट (अधिकतम रु. ५००)
साथै उच्च मागका कारण, दराजले आफ्नो वितरण सेवा उपत्यका बाहिरका २० नयाँ स्थानहरुमा विस्तार गरेको छ । यसकारण सुरक्षित र सजिलो अनलाइन किनमेलका फाइदाहरू अनुभव गर्न यो अभियान नयाँ प्रयोगकर्ताहरूको लागि उत्कृष्ट सुरूवात हुनेछ ।
बर्दिबास, भीमदत्त, महेन्द्रनगर, छिरेश्वरनाथ, दमौली, देवदाहा, गैँडाकोट, कलैया, कपिलवस्तु, कावासोती, खैरहानी, लाहान, लेखनाथ, लुम्बिनी सांस्कृतिक, रामग्राम, राप्ती, रत्ननगर, साइनामाइना, सुनवाल, तिलोत्तमा, जलेश्वर
साथै, दराजका सबै नयाँ प्रयोगकर्ताहरूले रु. २०० मूल्य भएको पहिलो अर्डर भाउचर निःशुल्क पाउनेछन् । यो केवल नयाँ प्रयोगकर्ताहरुको लागि मात्र हो । यो दराज एप पहिलो चोटी खोल्दा पाइन्छ र २ हजार वा अधिकको समान खरिद गर्दा प्रयोग गर्न मिल्छ । हाट बजारमा नयाँ प्रयोगकर्ताले अतिरिक्त भाउचरहरू जित्ने मौका पनि प्राप्त गर्नेछन।
निःशुल्क वितरण, निःशुल्क भाउचरहरू, र बैङ्क डेज छुट, र नयाँ ग्राहकलाइ थप छूट हुने भएकोले हाट बजार दराजबाट अनलाइन किनमेल गर्नको लागि उत्तम समय हो ।
हाट बजार को लागि उत्साहित दराज नेपालका प्रबन्ध निर्देशक, लिनो अलरिङ्गले भने, ‘ईएमआई सेवाको सुरुवात, साथै अन्य थुप्रै अफरहरु, र नेपालको धेरै नयाँ स्थानहरुमा दराजको होम डेलिभरी सेवा विस्तार भएकोले दराज हाट बजार दुबै नयाँ र पुराना दराज प्रयोगकर्ताहरुको लागी दराजबाट अनलाइन किनमेल गर्न उत्तम समय हो ।’
सिजनमै खाद्यसँग आवश्यकभन्दा कम खाद्यान्न मौज्दात
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री काठमाडौंमा अस्पताल भर्ना